नेपाल आज | धैर्य भएर प्रतिकुल परिस्थितिको सामाना गर्छुः हिमानी शाह (अन्तरवार्ता)
धैर्य भएर प्रतिकुल परिस्थितिको सामाना गर्छुः हिमानी शाह (अन्तरवार्ता)
हिमानी ट्रस्टको उद्देश्य के हो ? यसले क–कसलाई सहयोग गर्छ ? महिला, युवा, बालालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरु लाई सहयोग गर्छ । यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको मानिसको जीवनस्तर उकास्नु हो । त्यसकारण यी सम्पूर्ण सहयोग आवश्यक परेका व्यक्तिहरुलाई समेटेको छ ।
यो संस्थाबाट कति मानिसहरुले लाभ लिइरहेका छन् नि ? वास्तवमा हामीले हाम्रो कामबाट कतिजना लाभान्बित भए भनेर रेकर्ड त राख्ने गरेको छैनौं । सानाठूला परियोजनाहरु मार्फत केही जिल्लाहरुमा सहयोग गरिरहेका छौं । हामीले दुई ठूला परियोजनाहरु दोलखा जिल्लामा सञ्लालन गरेका थियौं । जहाँ मानिसहरुलाई आवश्यक पानी दिइयो , शौचालयहरु बनाइयो , विद्यार्थीहरुलाई पोशाक र कापीकलम बाँडियो । महिलाहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरेका थियौं । दोलखाबासी सम्पूर्णलाई हामीले बिभिन्न माध्यमबाट सहयोग गरेका थियौं । सुदूरपश्चिमका बाढी पिडीतलाई सहयोग गर्यौं । झन्डै १०,००० व्यक्तिहरुलाई यस संस्थाले सहयोग गरिरहेको छ । भूकम्पपीडितलाई पनि हामीले सहयोग गर्यौं ।
तपाइको यस संस्थाबाट अरु के–कस्ता कार्यक्रमहरु गर्दैछ ? खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा रहेका असक्षम व्यक्तिहरुलाई हाम्रो साथ सहयोग निरन्तर रहनेछ । निकट भविष्यमै महिलाहरुको जीवनस्तर उकास्ने खालका कार्यक्रमहरु ल्याउनेछौं ।
कार्यक्रमको लागि आर्थिक व्यबस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ? हामी हाम्रो परिवारबाटै उठाउछौँ । देशबिदेशमा रहेका हाम्रा शुभेच्छुकहरुबाट पनि सहयोग प्राप्त हुने गरेको छ ।
धेरै मानिसहरुले तपाईले राजनीतिक पृष्ठभूमी बनाइराख्नुभएको छ हिमानी ट्रष्टमार्फत भन्छन् नी ? मानिसहरुलाई जे मनलाग्छ त्यो भन्न दिनोस् । हामी मन, वचन र कर्मले निःश्वार्थ सहयोग गरिरहेका छौं । तपाईले साधारण मानिसहरुसँग अन्तक्र्रिया गरिसकेपछि , देशको सामाजिक आर्थिक अवस्थाका बारेमा बुझ्नुभयो । यसलाई कसरी व्याख्या विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
तपाई समाजमा के परिवर्तन देख्न चाहनुहुन्छ ? म मेरो देशमा सबै मानिस शिक्षित होउन् भन्न चाहन्छु । शिक्षाले नै मानव जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । यहाँ धेरै देशहरु छन्, जहाँ जनसंख्या धेरै छ, देश गृहयुद्घमा फसिरहेको छ । विभिन्न बिचारधाराका व्यक्तिहरु छन् र फरक समस्याहरु छन् । तरपनि उनीहरु धेरै विकसित छन् ।
तपाईको विचारमा नेपालमा चाहिँ कम विकसित हुनुमा के लाग्छ ? हामी भूपरिबेष्ठीत देशका नागरिक हौं । यहाँ नै छ ठूलो फाइदा र बेफाइदा । हामी कुन बास्तविक धरातलमा छौं भन्ने कुरामा भर पर्दछ । हामीले पूर्णरुपमा हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरुको उपयोग गर्न सकेका छैनौं । बाली प्रशस्त रुपमा उत्पादन गर्न कृषि आधुनिकिकरणको खाँचो छ । हामीले हाम्रो जडिबुटी , बनस्पति र जीवको विशाल धन भुल्नु हुँदैन । नेपाल गरीव देश हो ? होइन । हामीले यो देशको मुहार फेर्नलाई कडा परिश्रम गर्नुपर्छ ।
व्यक्तिगत जीवनः बिहे अगाडिको जीवनका बारेमा बताइदिनोस् न । म एक्लै हुर्किए, मेरो आमा होइसिन्नथ्यो । म सँगै दुईजना दिदीबहिनीहरु छन् । हामी धेरै हेरविचार गर्ने र मायालु वातावरणमा हुर्केका थियौं ।
तपाईका शोखहरु के के छन् ? घोडा चढ्ने, गीतसंगीत सुन्ने र किताब पढ्ने ।
सबै मानिसका राम्रा र नराम्रा बानीहरु हुन्छन् । पति पारस शाहको एउटा राम्रो र एउटा नराम्रो बानी बताइदिनुहास् न ? म यो कुरामा विश्वास गर्दछुकी, मैले अरुको बारेमा राम्रो वा नराम्रो कुरा गरेर केही पाउन सक्दीन ।
तपाईप्रति ज्ञानेन्द्र शाह र कोमल शाह ले कस्तो व्यवहार गर्नहुन्छ ? उहाँहरुबाट मैले धेरै माया पाएको छु । बुहारी हैन, छोरीको व्यवहार गरिबक्सन्छ । तपाईका छोराछोरीहरु के गर्दै छन् ? उनीहरु यहिँ नेपालमा पढिरहेका छन् ।
तपाई आफ्नो छोराछोरीलाइ कति समय दिनुहुन्छ ? आमाको लागि छोराछोरी भनेको पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । म उनीहरुले चाहेको बेला जतिबेला पनि समय दिन सक्छु ।
एउटा व्यक्तिको रुपमा, तपाईका असल गुणहरु के के छन् ? मेरो विचारमा, मान्छेले आफ्नो गुणहरु आफैंले बताउन सक्दैन । यो त अरुले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कुरा हो नि, हैन र ।
तपाई प्रतिकुल अवस्थालाई कसरी सम्हाल्नुहुन्छ ? धैर्य भएर ।
तपाईको विचारमा, मानिससँग हुनैपर्नै गुणहरु के के छन् ? सबै व्यक्तिमा मानवता हुनुपर्छ ।
तपाईको लागि परम आनन्द के हो ? शान्तिपूर्ण वातावरण
के तपाई अध्यात्मवादमा रुची राख्नुहुन्छ ? तपाई भगावानको विश्वास गर्नुहुन्छ ? मानव भएको नाताले, म भगवानमाथि विश्वास गर्छु । सबैले यस जीवनमा राम्रा काम गरेर मुक्तिको बाटो खोज्छन । मपनि त्यहीं चाहन्छु ।
तपाई आमा, श्रीमती, बुहारी र समाजसेवी यी सबै भूमिकालाई कसरी व्यवस्थित बनाउनुहुन्छ ? पहिलो कुरा त , तपाईले आफ्नो उद्देश्य, जिम्मेवारी र योजनाहरु राम्रोसँग बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने यी सबै भूमिकाहरु आफैं व्यवस्थित हुँदै जानेछन् ।
तपाई खुसी लाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ ? खुसी भनेको त्यो क्षण हो, जहां भगवान र राम्रो कामबाट नतिजा प्राप्त हुन्छ । यसले समाजको लागि अनि आफ्नै लागि पनि सन्तुष्टि प्रदान गर्दछ ।
तपाई छुट्टीमा के गर्न चाहनुहुन्छ ? नेपालमा बच्चाहरुसँग बस्न खेल्न ।
तपाईको जीवनको दर्शन के हो ? मेरो जीवन दर्शन साधारण छ । हरेक दिन सिक्नको लागि हो, सिक्न छोड्नु हुँदैन । महिलामा नभइ नहुने विशेषताहरु के हुन् ? धैर्यता र घरलाई घर बनाउन सक्नु पर्छ ।
(नेपालआजको प्रकाशन होप म्यागजिनका लागि केही समय पहिले लिइएको अन्र्तवार्ताको नेपाली रुपान्तरण )
himani interview with nepal aaja himani shah himani trust nepal aaja
शिक्षण पेशा छोडेर राजनीतिमा लागेका पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त